သက္ကံရွာဟောင်းသို့ တစ်ခေါက်(၂) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ၀တ္ထုတို » သက္ကံရွာဟောင်းသို့ တစ်ခေါက်(၂)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 7:41 AM
Posted by မိုးသက် at 7:41 AM Read more
မြတ်ကြည် February 21, 2012 at 2:09 AM
တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ရေးထားတာ။ တကယ်ကြီးလို့ကို ခံစားရတယ်။ ဘာလို့ နောက်ဆုံးကျမှ လန်ကျုတ်ဖြစ်နေရတာလဲ? ဟင်းနော်။ ဒါနဲ့ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းတွေရှိတယ်။ စာမူပို့ပါလား ငါ့မောင်?
မြတ်ကြည် February 21, 2012 at 2:10 AM
ကျန်ခဲ့လို့ ... ပထမအပိုင်း ဖတ်ပြီးကတည်း က စိတ်ဝင်စားလို့ ဒုတိယ အပိုင်းကို မျှော်နေတာ။
Anonymous February 21, 2012 at 3:51 AM
အလင်းသစ် February 21, 2012 at 4:25 AM
လန်ကျုတ်မို့ပဲညီလေးရာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ကို မျောပါ သွားတယ်။။ ရေးထားတာလေး မိုက်တယ်။။ ဘာပဲပြောပြော အကိုတော့ ဆင်လမ်းစု ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘေးက ဝါးတောကြီးကို စိတ်နာတယ်၊ နောင်လှိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးက ကျတ်ကုန်းကြီးကို စိတ်နာတယ်။။ ဒါပေမယ့် ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ ကျောင်းသား ဘဝကို ပြန်လွမ်းသွားရတာပဲညီရေ။။ :)
Anonymous February 22, 2012 at 5:36 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ကို အဲ့ဒီ့ရွာကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်... အရေးအသားက စာဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်.. နောက်လည်း ဒီလိုမျိုး များများရေးပါ.. =)
မင်းတို့အင်တိတ်.............. May 19, 2012 at 9:15 AM